Otu esi eyi uwe na Dubai | Akụkọ njem
Mariela Carril | | Atụmatụ, United Arab Emirates
na United Arab Emirates Ha bụ otu ndị eze na n'etiti ha bụ Dubai. Ruo oge ụfọdụ ugbu a, ọ na -ewu ewu nke ukwuu maka ihe owuwu ya ndị na -emegide echiche na inwe otu ọdụ ụgbọ elu kachasị ukwuu na nke dị egwu n'ụwa, yabụ o nweela ọtụtụ ndị njem.
Mana Dubai bụ obodo mba AlakụbaDị ka njem nlegharị anya na nke mba ụwa ka ọ dị, yabụ enwere ụfọdụ ụzọ esi eyi uwe nke mmadụ ga -asọpụrụ. Taa, anyị ga -ezute ha, yabụ akụkọ a gbasara otu esi eji ejiji na Dubai.
2 Otu esi eyi uwe na Dubai
Dịka m kwuru, onye isi ala, nke isi obodo ya bụ obodo nwere otu aha, bụ n'ụsọ oké osimiri nke Ọwara Peshia a ma ama na nke bara ọgaranya. Alaka nke oke osimiri na -abanye ma gafere obodo. Ịdị nso a n'oké osimiri mere ka ndị bi n'ala ndị a rara onwe ha nye ịkọ na ịzụ ahịa pel. N'ihi ọnọdụ ya, ọbụlagodi tupu achọpụtabeghị mmanụ, ọ bụ mpaghara chọrọ ọ maara ka esi adị n'aka ndị Britain afọ 200.
Ọ bụ n'ime afọ 60 mgbe ndị Emirate chọpụtara mpaghara mmanụ ya bara ụba na afọ iri ka e mesịrị ọ sonyeere ndị ọzọ ịkpụ United Arab Emirates. Kedu ụdị ọchịchị gị ugbu a? Ọ bụ a ọchịchị onye ọchịchị. O nweghị ọtụtụ ndị bi na ya taa imirikiti ndị bi na ya bụ ndị mba ọzọ, ndị bi ebe ahụ maka azụmaahịa ma ọ bụ ndị si mba ọzọ na -arụ ọrụ na ngalaba ihe owuwu na ọrụ ndị ọzọ.
Dubai enweghị mmanụ dị ka ndị agbata obi ya, yabụ ee ma ọ bụ ee, ọ na -atụle ịgbasa ọrụ akụ na ụba ya, ya mere ọ tinyela nnukwu ego n'ịkwalite njem nlegharị anya.
Anyị na -alaghachi na mbido: ọ bụ alakụba Alakụba otu a ndị nwere ya gbagwojuru anya bụ ụmụ nwanyị ọdịda anyanwụ ọ marala ahụ iyi uwe dị mma na nke dị nfe na ihu igwe na -ekpo ọkụ.
Ọ bụkwa eziokwu na ọ nweghị mba abụọ Alakụba bụ otu na na mgbe ụfọdụ na otu ma ọ bụ nke ọzọ iwu na -aka njọ, ọkachasị maka ndị mba ọzọ. Na ụkpụrụ, ruo mgbe ị ga -ahụ ihe iwu a dị, ọ dị mma ka ị dịrị njikere ikpuchi aka gị na ụkwụ gị na isi gị, n'ebe ụfọdụ. Ya bụ, yi uwe ogologo, ogologo ogologo ọkpa na ihe mkpuchi aka sara mbara na -adị mgbe niile.
Ugbu a, obodo Dubai bụ obodo ọgbara ọhụrụ na anaghị emechi ya n'ihe gbasara uwe, ka emechara enwere ọtụtụ ndị mba ọzọ. Yabụ, ị ga -ahụ ụdị uwe ọ bụla, site na mkpụmkpụ ruo burka. Mgbe ahụ, na họtel, ụlọ nri na ebe ịzụ ahịa, ebe enwere ike izute ndị obodo na ndị mba ọzọ, ọ dị mma dị nsọpụrụ ma kpuchie nkwonkwo ụkwụ na ubu.
Ọ bụrụ na ịnweghị ebumnuche ịgbaso okwu ochie "Ebe ị na -aga mee ihe ị hụrụ" Ndị a bụ ebe ị ga -enwe obere nsogbu. Karịsịa ma ọ bụrụ na ị gaa njem na mpụga Ramadan. Ọ bụrụ na ị kpebie ịpụ nri abalị n'ebe mara mma, mgbe ahụ ị ga -eyi uwe n'oge ahụ.
Na osimiri? Mgbe ahụ a na -eyi uwe osimiri naanị n'ụsọ osimiri. N'ebe a, ịnweghị ike ịme ihe mmadụ na-emekarị n'ụsọ osimiri, nke iyi akwa ịsa ahụ ụbọchị niile ma ọ bụ ịnọ na flip-flops ụbọchị niile. Ugbu a n'ụsọ osimiri ị nwere ike iyi akwa igwu mmiri, bikini... ma n'akụkụ osimiri ma na ọdọ mmiri na n'ogige mmiri. O doro anya, enweghị nudism ma ọ bụ eriri.
Ma si n'ebe ndị a, ya bụ, ọ bụrụ na ị gaa mkpagharị na mpaghara kacha ochie na Dubai, ọ bụrụ na ị gaa ahịa ọdịnala ma ọ bụ ụlọ alakụba mgbe ahụ ị ga -akpachara anya. Ma ọ bụ na ozugbo ị gaghị enwe mmetụta na ụwa gị mana na mba ofesi. Ndị obodo na omenala ha ga -agba gị gburugburu n'oge na -adịghị anya yabụ na ị ga -akwanyere ya ugwu. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzere nlele ma ọ bụ nkwupụta, nke ị na -aghọtachaghị mana ha ga -emekwa otu ihe ahụ, ka mma kpachara anya.
N'ihe banyere ịga ịga ụlọ alakụba, ụfọdụ na-enye ohere nleta sitere n'aka ndị na-abụghị ndị Alakụba, ma ndị nwoke ma ndị nwanyị kwesịrị ịga kpuchie ụkwụ na aka. Ụfọdụ nwedịrị uwe ndị ọzọ, ọ bụrụ na ị hapụghị otu ụlọ nkwari akụ ahụ yiri ya.
Ugbu a ebe ọzọ na -ewu ewu na Dubai bụ ọzara ahụ. Enwere ọtụtụ njegharị n'ọzara ma ọ kaara gị mma ịme ụfọdụ n'ihi na ha mara mma. N'okwu a, ọ na -adị mma mgbe niile iyi uwe ogologo ọkpa, mkpụmkpụ ma ọ bụ uwe ogologo ọkpa (Ọzọkwa ndị ị nwere ike wepu ọkara ụkwụ), yana akwa akwara, uwe elu ma ọ bụ uwe elu. Na n'ezie, sunscreen na okpu.
N'ehihie ọzara na -ekpo oke ọkụ ma yi uwe na -ekpuchi gị oke bụ nhọrọ kacha mma maka anaghị ata ahụhụ ọkụ. Ọ nwere ike na -ajụ oyi, ọ dabere n'oge afọ, ọ nwere ike bụrụ na ị na -aga n'abalị, yabụ na ọ bụ ihe amamihe ka ị weta mmechi akpụkpọ ụkwụ.
Ọ bụrụ na ụmụ nwanyị enweghị ike igosi obi, ogwe aka na apata ụkwụ, ụmụ nwoke enweghị ike ịga ije na-enweghị ụkwụ, ma ọ bụ na mkpụmkpụ mkpụmkpụ ma ọ bụ uwe mmiri nke na -eme ka otu. Enweghị uwe mwụda, obere mkpụmkpụ, n'elu, transperent, enweghị ndumodu nke uwe ime. Karịsịa, ewela iwe ma ọ bụrụ na ha adọta mmasị anyị.
Kedu uru ọ bara ikwu gbasara akwa akwa ma ọ bụ omume nke ọdịbendị na -abụghị nke anyị? Anyị agaghị agbanwe ihe ọ bụla ma anyị na -agafe, yabụ ọ bụrụ na n'amaghị ama anyị emejọọ mmadụ wee dọta uche anyị, anyị kwesịrị ịrịọ mgbaghara. Ọ dịghị onye chọrọ itinye ndị uwe ojii n'ọrụ, yabụ na ọ bụ naanị inwe ezigbo echiche.
Yabụ, na -achịkọta ihe ihe kachasị mkpa maka otu esi eyi uwe na Dubai: N'ọha ọha ndị kacha ewu ewu, ụmụ nwanyị ekwesịghị ikpuchi isi ha, ee, na ụlọ alakụba, ha ga-ekpuchi ubu ha ma ọ dịkarịa ala ikpere, enweghị obere uwe mwụda, t-shirts ga-enwerịrị obere aka, ee ị nwere ike iyi bikini, jeans , n'agbanyeghị ọ dịghị ihe na -ekpughe. Ee n'abalị, mana mgbe niile, anyị na -eji uwe dị n'aka kpuchie ihe anyị na -ekpughe. N'ọtụtụ ebe omenala ka anyị na -ejigide kpuchiri ekpuchi, ọ ka mma, otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na anyị gaa n'ụlọ steeti.
Na ndị ikom? Ha dị mfe, mana ọ ka bara uru ịmara ihe ole na ole: ha nwere ike ịga ije na mkpụmkpụ na -adịghị oke mkpụmkpụ, n'agbanyeghị na ọ bụghị nke mbụ, ee ha ga -abụ ndị umengwụ, enweghị ịgba ịnyịnya, uwe egwuregwu ma ọ bụrụ na ị na -eme egwuregwu, ma ọ bụrụ na ọ bụghị eziokwu, ọ bụrụ na ị gaa ụlọ alakụba ị ga -eyi ogologo ogologo ọkpa ...
Ọ nwere ihe na -eme ma ọ bụrụ na anaghị m akwanyere ụfọdụ n'ime ihe a ùgwù? Ị nwere ike ịga site na ịnweta ụfọdụ okwu ọjọọ, na-agafe na a anya ọjọọ ruo mgbe ị ga -emekọ ihe onye uwe ojii na mkporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Atụmatụ » Otu esi eyi uwe na Dubai